Gaadiid badan oo ku xayiran Xuduuda Jabuuti iyo Ciidanka Somaliland oo lacago xad dhaaf ah waydiisanaya gaadiidka. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaGaadiid badan oo ku xayiran Xuduuda Jabuuti iyo Ciidanka Somaliland oo lacago xad dhaaf ah waydiisanaya gaadiidka.
July 17, 2019 marqaan Faalloyinka, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 1
Wararka naga soo gaaraya Magalada Lowyacado oo ku taalla inta u dhaxeysa dalka Jabuuti iyo Maamulka Soomaaliland ayaa waxaa ay sheegayaan in Gaadiid farabadan oo ka yimid dalka Jabuuti uu ku xayiran yahay halkaas.
Gaadiidkaan oo sida rakaab kala duwan ayaa la sheegay in sababta ay u xayiran yihiin ay qeyb ka tahay, kadib markii Maamulka Magalada Lowyacade ay kusoo rogeen inay darawalada Gaadiidka bixiyaan lacag taas oo gaareysa ilaa Saddex dollar.
DAAWO:- Feysal Cali Waraabe “DFS waxay noo diidan tahay jidiinkii aan cuni lahayn meel walbo way naga soo xiraysaa”.
War annagaa yaab aragnay